Wed, Jun 3, 2020 at 11:43am
काठमाडौँ, १८ भदौ यूनेस्को सम्पदा सूचीमा रहेका कतारका भव्य प्राचिनतम महलहरुमा लाखौं दर्शकका सामु लोगो सार्वजनिक गरिएको छ । कतारमा हुने विश्वकप फुटवल २०२२ को लागो सार्वजनिक भएको हो । लोगोमा विश्वकप आयोजना हुने कतारका ८ रंगशालाको प्रतिनिधित्व हुने गरि ८ अकंलाई जोड दिएर मरुभूमिको संस्कृति झल्किने रंग प्रयोग गरिएको छ । नोभेम्बर २१ २०२२ देखि डिसेम्बर १८ सन् २०२२ सम्म यो प्रतियोगीता..
काठमाडौँ, १७ भदौ सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तत्काल निर्वाचन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले कमिटीको भदौ २२ गतेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अगाडि नबढाइ यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त आदेशमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी उचित निकासमा पुग्नु मनासिब देखिएकाले भदौ २२ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित..
नखेल्ने भए ज्ञानेन्द्रले ओमानमा हुने टि–ट्वान्टी सिरिज !!
काठमाडौँ, १७ भदौ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ओपनर ब्याट्सम्यान समेत रहेका ज्ञानेन्द्र मल्लले पाँच राष्ट्रबीच हुने टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिजमा सहभागि नहुने भएका हुन् । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मिडिया म्यानेजर सुरज शाक्यका अनुसार उनले आफ्नै व्यक्तिगत कारणले सिरिज नखेल्ने भएको बताएका छन् । असोज १८ देखि २३ सम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल हङकङसँग असोज १९ गते खेल्नेछ । आयोजक ओमानसँगै नेपाल ओमान, आयरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड..
एजेन्सी, १६ भदौ विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले सन् २०१९ को उत्कृष्ट फिफा बर्ष खेलाडी अवार्डका लागि तीन खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । मनोनयनमा लियोनल मेस्सी, भर्जिल भान डाइक र क्रिस्टियानो रोनाल्डो परेका छन् । यसअघि मनोनयमा परेका खेलाडीबाट फिफाले सोमवार शीर्ष तीन खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो । यी तीन खेलाडी युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) को उत्कृष्ट खेलाडीको पनि मनोनयनमा..
काठमाडौँ, १४ भदौ भारतले नेपाललाई पराजित गर्दै पाँचौँ संस्करणको साफ यू–१५ (पन्ध्र वर्षमुनि) च्याम्पियनसिपको उपाधि हात पारेको छ । भारतको कोलकातास्थित कल्याणी रङ्गशालामा आज भएको फाइनल खेलमा भारतले नेपाललाई ७–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो । यू–१५ मा नेपालले अहिलेसम्म च्याम्पियन हुनसकेको छैन । त्यस्तै यससँगै तेस्रोपटक फाइनल पुगेको नेपाललाई उपाधि जित्न फेरि पनि भारत नै तगारो बन्यो । यसअघि सन्..
प्रिमियर लिगमा शनिबार ८ खेल हुँदै, यस्तो छ समय तालिका !
काठमाडौँ, १४ भदौ । इंग्लिस प्रिमियर लिगमा शनिबारबाट चौथौं चरणको खेल सुरु भएका छन् । आज म्यानचेस्टर युनाइटेड, चेल्सी, म्यानचेस्टर सिटी, लिभरपुलजस्ता बलियो क्लबहरु पनि मैदान उत्रँदैछन् । तीन चरणको खेल सम्पन्न भइसक्दा ३ खेलमा सबैमा जित निकालेको लिभरपुल ९ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । ७ अंक भएको म्यानचेस्टर सिटी दोस्रो स्थानमा छ भने ६ अंक भएको आर्सनल तेस्रो स्थानमा छ । सबै खेल नेपाली..
एजेन्सी, १४ भदौ पाँचौ संस्करणको साफ यु–१५ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपालले भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्दै छ। खेल भारतको कोलकत्तास्थित कल्याणी रंगशालामा शनिबार दिउँसो ३ बजे सुरु हुने छ। पाँच राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणमा भारतबाहेक अन्य सबै तीन टिमलाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो। अघिल्ला दुई संस्करणमा नेपाल भारतसँगै स्तब्ध भएको थियो। त्यसैले यो पटक पनि भारत तगारोको रुपमा उभिएको छ। नेपाली टिमका..
काठमाडौँ, १३ भदौ युवा तथा खेककूदमन्त्री जगतबहादुर सुनुवार (विश्वकर्मा) ले खेलकूद क्षेत्रलाई अझ उँचो बनाउन र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न खेलकूद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक आएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “खेलकूदको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ, देशको प्रतिष्ठा उँचो बनाउन खेलकूदको थप अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।” प्रतिनिधिसभा, शिक्षा र स्वास्थ्य समितिकोे आजको..
काठमाडौं, १३ भदौ । कतारमा सन् २०२२ मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणको छनोटअन्तर्गत कुवेत र चिनियाँ ताइपेविरुद्ध खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई बिदाइ गरिएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले सादोबाटोमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शुक्रबार खेलाडीलाई बिदाइ गरेको हो । बिदाइका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल, एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालगायत सातदोबाटो पुगेका थिए । बिदाइ कार्यक्रममा..
काठमाडौँ, १२ भदौ नेपालको यू–१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दोस्रो अभ्यास खेलमा श्रीलङ्काको स्थानीय क्लब बादुरेलियालाई पराजित गरेको छ । श्रीलङ्काको कोलम्बोस्थित सरे क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपालले बादुरेलियालाई ८० रनले हराएको हो । नेपालले बादुरेलियालाई १६५ रनको लक्ष्य दिएको थियो । बादुरेलिया २३ दशमलव एक ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै मात्र ८४ रन बनायो । बादुरेलियाका लागि थिभेन्दु डिक्वेले सर्वाधिक ३१ रनको..
काठमाडौँ, १२ भदौ भारतमा जारी पाँचौँ संस्करणको साफ यू–१५ (पन्ध्र वर्षमुनि) च्याम्पियनसिपको फाइनलमा आइतबार नेपाल र भारत भिड्ने भएका छन् । भारतको कोलकातास्थित कल्याणी रङ्गशालामा आज भएको राउन्ड रोविन लिगको अन्तिम खेलमा नेपालले भुटानलाई ६–० गोलले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो । यस्तै भारत साविक विजेता बंगलादेशलाई ४–० गोलले पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो । भुटानसँगको खेलमा नेपालका लागि कप्तान प्रदिप लम्सालले..
काठमाडौँ, १२ भदौ कतारमा सन् २०२२ मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणको छनोटअन्तर्गत कुवेत र चिनियाँ ताइपेविरुद्ध खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले आज २३ सदस्यीय टोली घोषणा गर्नुभएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले जनाएको हो । नेपालले यही भदौ १९ गते कुवेतसँग उसैको मैदानमा खेल्दै प्रतियोगिता उद्घाटन गर्ने..
साफ यू–१५ च्याम्पियनसिप : भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा
काठमाडौँ, १२ भदौ नेपाल पाँचौं साफ यू–१५ च्याम्प्यिनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । कल्याणी रंगशालामा बिहिबार भएको राउण्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा नेपालले भुटानलाई ५–० गोलले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो । नेपालको जितमा प्रदीप लम्सालले दुई तथा अशिम राई, क्रिस सापकोटा र निराजन खत्रीले १-१ गोल गरे । नेपाललाई फाइनल प्रवेशका लागि केहीबेरमा हुने भारत र बंगलादेशबीचको खेल कुर्नुपर्ने भएको छ। भारतले..
जुम्ला, १२ भदौ जिल्ला खेलकूद विकास समिति एक महीनादेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ । गत १३ साउनदेखि तत्कालीन हरिप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको समिति समयावधि पुगेर खारेज भएपछि जिल्ला खेलकूद विकास समिति पदाधिकारीविहीन भएको हो । समिति पदाधिकारीविहीन भएपछि कार्यालयको खाता सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नयाँ कार्यसमिति कहिले आउने हो यस विषयमा कुनै टुङ्गो लाग्न नसकेको जिल्ला खेलकूद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख बरमबहादुर..
काठमाडौं, १२ भदौ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का लागि आगामी मंसिरमा आयोजना हुन लागेको पुरुष क्रिकेटको तयारी आइतबारबाट सुरु हुने भएको छ । सागमा समावेश २७ खेलमध्ये अन्यको तयारी साउन पहिलो साताबाट सुरु भए पनि क्रिकेटको तयारी ढिलोगरी आइतबारबाट सुरु हुने भएको हो । बन्द प्रशिक्षणका लागि ३५ खेलाडीलाई बोलाइएको छ । जसमा कप्तान पारस खड्कासहित उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर,..
काठमाडौँ, ११ भदौ नेपाल क्योकुसिन कान कराँते एशोसियशनको आयोजनामा पहिलो संस्करणको अल नेपाल खुल्ला फुल कन्ट्याक्ट कराँते यसै सातादेखि पोखरामा शुरु हुने भएको छ । दुई दिने उक्त प्रतियोगिता यही भदौ १३ र १४ गते हुने आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक सङ्घका महासचिव राजेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । पोखरा रङ्गशालाको कबर्डहलमा हुने प्रतियोगितामा १७ वटा फुल कन्ट्याक्ट कराँते सङ्घ, तीन विभागीय..
काठमाडौँ, ११ भदौ । भारतमा जारी साफ यू–१५ (पन्ध्र वर्षमुनि) च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्न नेपाललाई भूटानविरुद्धको खेल जित्नै पर्ने दबाब छ । भारतको कल्याणी रङ्गशालामा भोलि बिहीबार हुने अन्तिम लिग खेलमा नेपालले भूटानलाई पराजित गरेमा मात्र फाइनलमा स्थान बनाउने छ । त्यस्तै हिजो भएको खेलमा नेपालले साविक विजेता बङ्गलादेशलाई ४–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको थियो । नेपाल र..
नेपाली यू–१९ क्रिकेट टिम श्रीलंकाको एसएससीसँग पराजित
काठमाडौं, १० भदौ नेपाली यू–१९ क्रिकेट टिम अभ्यास खेलमा श्रीलंकाको एसएससी यू–२३ क्रिकेट टिम सँग तीन विकेटले पराजित भएको छ । श्रीलंकामा मंगलबार भएको खेलमा नेपाली युवा टिम अन्तिम ओभरमा पराजित हुन पुगेको हो । २४१ रनको चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको एसएससीले निर्धारित ४२ ओभरमा सात विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो । यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ४२ ओभरमा सात..
आगामी पुस ५ गते काठमाडौँमा म्याराथन हुँदै
काठमाडौँ, १० भदौ आगामी पुस ५ गते ‘प्रो स्पोर्टस् प्रालि’को आयोजनामा १३आँै संस्करणको काठमाडौँ म्याराथन हुने भएको छ । उक्त म्याराथनमा सात स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुने आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रालिका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पुरुष र महिलातर्फ फुल म्याराथन, हाफ म्याराथन, पाँच किलोमिटर खुला दौड, कर्पोरेट दौड, पाँच किलोमिटर छात्रा÷छात्र दौड तथा तीन किलोमिरट ह्वीलचेयर दौड हुनेछ । यस पटक फेमिली..
साफ यू-१५ फुटबल : बंगलादेशलाई हराउँदै नेपाल फाइनल नजिक
काठमाडौं, १० भदौ । भारतको पश्चिम बंगालमा जारी साफ यू–१५ फुटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले बंगलादेशमाथि शानदार जित हात पारेको छ। कल्याणी रंगशालामा भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई ४–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । नेपाललाई फाइनमा स्थान बनाउन आजको खेल जित्नैपर्ने दबाब थियो । प्रतियोगितामा शीर्ष दुई टोलीले फाइनलमा स्थान बनाउने छन् । नेपालले अब भुटबनसँग एक खेल खेल्न बाँकी छ । पाँच टोली सहभागी..
काठमाडौँ, ९ भदौ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम सोमबार मलेसियाको फुटबल लिग च्याम्पियन जोहर दारुल ता'जिम एफसीविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित भएको छ। जोहर शहरको पसार गुन्डाङ रंगशालामा भएको खेलमा नेपाल १-० गोलले पराजित भएको हो। नेपालले फिफा विश्वकप २०२२ र एएफसी एसियन कप २०२३ को छनोट प्रतियोगिताको तयारीका लागि जोहरविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। नेपालविरुद्ध जोहरले खेलको दोस्रो मिनेटमै अग्रता लिएको थियो। सुमन अर्यालले फल गरेपछि..
Results 1917: You are at page 14 of 64